BIYO DIIRINTA MIRAHA DHIRTA KA HOR INTAAN LA BEERIIN: MA LAGAMA MAARMAAN YAHAY, SIDEE BAA SAX AH, WAXA LOO BAAHAN YAHAY, SI DHAKHSO AH U KORODHO KA DIB MARKAAD BEERTID DHUL FURAN, MA SUURTAGAL IN LA HELO GOOSASHADA WEYN? - BEER CAGAARAN
Hab wanaagsan oo aad u hesho goosashada weyn: qoynaya abuur dhir ka hor intaan la beeri. Sidee u saxdaa?
Dhir - cagaarsho caadi ah oo loo wada dhan yahay, laga helaa beerta beerta iyo beerta. Si fudud u kordhi haddii aad ogtahay qaar ka mid ah waxyaalaha suubban ee la xidhiidha geedi socodka. Waxaa la ogyahay in dhirta dhirta Gacmaha si aad u tartiib ah. Isticmaalka abuurka qalalan, geedo waxaa la arki karaa oo keliya laba ilaa afar toddobaad. Si loo dedejiyo nidaamkan, iyo sidoo kale si loo hagaajiyo tayada dalagga, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo maaddada loogu talagalay in lagu beero adoo qallajinaya. Ka fiiri maqaalka haddii ay lagama maarmaan tahay iyo sababta ay muhiim u tahay in lagu qooyo miraha warshad ka hor intaan lagu beerin dhul furan ama lagu koriyo si loo helo caleemaha degdegga ah, iyo sida loo sameeyo si sax ah.
Waa maxay qallajinta ka hor inta aan beero iyo waxa ujeedadu?
Daadinta waa marxaladda diyaarinta abuurka ka hor intaan la beeri Karin, taas oo ay ku dheregsan yihiin muddo ah xalal kala duwan: biyo kulul, caano, xal of kaneecada, peroxide, iyo kuwa kale.
Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee soosaaridda:
Ka hortagga iyo ka hortagga cudurrada burburin kara geedka.
Hubinta tayada, nolol shelf iyo biqilka wax lagu beerto.
Dardargelinta biqilka abuurka iyo muuqaalka ugu horreeya ee abuuritaanka seedling.
Miyaan u baahanahay inaan sidan sameeyo?
Miyuu suurto gal yahay in la qooyo miraha geedka ka hor inta aan beero? Dhir ayaa lagu beeray karaa sidii abuurka qalalan, iyo ka dib barar. Si kastaba ha ahaatee, dhir waa dalag muddo dheer ah, iyo haddii aad u baahan tahay si aad u hesho caleemaha cufan, xooggan u muuqda ka dib barar, ka dibna haa, waxaad u baahan tahay in la qoyo.
Saameynta qashinka wax lagu beerto
Qoryaha dhirta ayaa leh cufan cufan, oo lagu daboolay saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo yareeysa biqilka. Qulqulista waxay ka caawisaa in la burburiyo lakabyo duban oo jilicsan. Iyadoo, miraha waxaa si fiican u nuugaan by qoyaan loo baahan yahay biqilka.
Tallaabo tallaabo tallaabo ah: maxay tahay iyo sida loola socdo hadhuudhka warshadda si degdeg ah u dhaqso?
Aan aragno sida iyo habka ugu wanaagsan ee loo qoyn karo miraha geedka ka hor inta aan la beeriin si loo helo biqilka degdegga ah.
Seeds waxaa lagu dhejiyaa weel yar oo leh qadar yar oo cusub oo diiran, diirimaad 37 ° C, si ay si khafiif ah u daboolaan.
Fasax ilaa barar, ka dibna ku beer.
Ku duub miraha geedka cheesecloth.
Ku hay vodka 15-20 daqiiqo.
Ka dibna biyo raaci biyo qallalan oo qalalan.
Waxyaabaha abuurka ayaa diyaar ah.
Waa muhiim! Saliidaha muhiimka ah waxay si fiican u xalinayaan xalalka alkolada, laakiin ma dhaafi kartid waqtigii loogu talagalay, maaddaama abuurka la burburin karo. Faa'iidada habkani waa in ay sidoo kale ka caawisaa in jeermiska geedka.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyoo ku saabsan soaking dhalidda miraha ee vodka:
Ku dhaji abuurka lakabka faashad, ku dabool dharka labaad.
Ku rid buulasha oo ku shub biyo kulul, laakiin ma karkarin biyo, sidaa darteed dareeraha wax yar ayaa daboolaya faashad.
Fasax ilaa 12 saacadood, beddel biyaha qabow 3-4 jeer.
Ka dibna ka saar abuurka oo barara oo beeran. Ama ku dhaji faashad qoyan iyo beeranba hore u bislaaday.
Waxaa jira ikhtiyaar leh isticmaalka biyo dhalaalid: waxaa la qaadi karaa oo la dhalaali karaa baraf cad, ama biyo la qaboojiyey qaboojiyaha, ka dibna dhalaalaya oo kuleyliya heerkulka qolka.
Iyada oo biyaha sidaas oo kale ku shub miraha la dhigo on dharka hoose ee saxanka.
Heerkulka cimilada heerkulku waa + 20- + 25 ° C. Weelasha waxaa la dhigaa meel madow illaa 48 saacadood.
Biyaha ayaa la beddelaa 3-4 jeer maalintii.
In xal of daloolka potassium
Ka qallajinta xalka potassium permanganate waa lagama maarmaanka u ah jeermi-tirinta miraha.
Si arrintan loo sameeyo, milix 1 oz. manganese 100 ml oo biyo diirran ah. Xalka wuxuu noqon doonaa mugdi, ku dhowaad madow.
Goobaha ku duudduubi cheesecloth ee mashiinka xalka 15-20 daqiiqo.
Waqti ka dib, iyaga si fiican u biyo raaci oo u qalaji, ama ku duub maro qoyan si aad u sii biqiso.
Samee xalka 1 qaado oo ah peroxide 3% iyo 0.5 litir. biyaha.
Ku duub miraha lakabka faashadda oo hoos u dhig foorno leh xal.
Ka dhig heerkulka qolka 12 saacadood, bedelida xalka si aad u hesho 3-4 saacadood mar kasta si oksijiinku u raacaan miraha oo aanay "kufin".
Ka dib markaad barareyso, ku tirtir biyo socda, qalalan.
Waxaa jira kiciyeyaasha kobcinta kobcinta kala duwan si ay u kordhiyaan caabbinta geedo si khataraha u nugul. Isticmaalka kiciyeyaasha kobcinta ayaa ka caawiya kor u kaca boqolkiiba biqilka dalagga. Ka dib qaabsocodka, qallajin kiciya kobcinta, abuurka ayaa la qalajiyey iyada oo aan la maydhin, lagu beeray.
Ku qallajinta xalka Appin: 100ml oo biyo nadiifa ah, oo leh heerkul ah 22-23 ° C, oo lagu tirtiro 4-6 dhibcood ee Appin. Yaree abuurka bacda faashad u samee xalka diyaarinta 18-24 saacadood, kareyso marmar.
Ku qallajinta xalka Humate potassium: qiyaas 0.5 garaam oo ah 1 litir oo biyo diirran. Seeds, ku duudduubtay maro, ku riday dhalada hal maalin, marmar walaaqa dareeraha.
Xalka guud ee biohumus ku walaaq biyo leh ee saamiga 1:20, dhir daawada xashiishadan aan wax ka badan 24 saacadood.
Marka lagu daro kiciyaasha kobaca ee la iibsaday, isku darka nafaqada ee laga sameeyay maadooyinka dabiiciga ah ayaa aad loogu jecel yahay guriga.
Tusaale ahaan: faleebo qoryo qoryo ah - il heer sare ah oo macdan ah.
Faleebo waxaa laga diyaariyey 2 tbsp. l ash iyo 1 l. biyaha.
Wax walba waa isku dhafan waxayna ku adkeeyeen dhowr maalmood.
Seeds waxaa lagu hayaa faleebo laga bilaabo 3 ilaa 6 saacadood, kareyso marmar.
Hormarinta Mushta - waxaa ku jira dhammaan qaybaha raadinta lagama maarmaanka u ah dhirta:
Waxaa laga sameeyey boqoshaada la qalajiyey, kuwaas oo lagu shubay qadar yar oo biyo ah.
Ka dib marka la qaboojiyo, bacda maro leh miraha waxaa lagu rusheeyaa faleebo 6 saacadood ah.
Ma jiraan siyaabo kale oo lagu wanaajiyo biqilka?
Marka lagu daro barar, waxaa jira siyaabo kale oo loo diyaariyo abuurka:
Calibration iyo kala soocida abuurka, si looga saaro non-spars.
Ku shub miraha qallalan bac muraayad ah, xabo ku qabo ciid qabow si qoto dheer ah 30-35 cm laba toddobaad. Ka qaad bacda dhulka ka hor intaadan beeri, qallajin abuurka warqad iyo beerid.
Ku kaydi abuurka biyo kulul, heerkulku waa 30 daqiiqo ilaa laba saacadood, ka dibna qalaji.
Iska ilaali abuurka bateriga kuleyliyaha dhexe, ku duub dharka mar hore. - Biyo raaci, ku duub bacda marada biyaha kulul, 3-4 jeer.
Qaadashada - isku qasin abuurka biyaha ee ku dheggan oksijiinka 18-24 saacadood. Ka dib qaabsocodka qashinka, miraha waa la qalajiyey.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo diyaariyo maaddada abuurka, laakiin qallajinta ayaa ah habka ugu waxtarka leh ee kor u qaada biqilka dhirta iyo hagaajinta tayada dalagga. Dadaalladu waa in la sameeyaa, laakiin waa u qalantaa inay ku raaxaystaan ​​fitamiinkan.